10ka Goobood ee ugu Wanaagsan ee Daawashada Anime ee Bilaashka ah ee Luulyo 2021 - Muuqaalka Cradle
Meelaha Ugu Fiican ee Anime Streaming
2 Comments 10ka Goobood ee ugu Wanaagsan ee Daawashada Anime ee Bilaashka ah ee Luulyo 2021
Dhammaanteen waan jecelnahay Anime, waa sababta goobtan loo abuuray markii hore. Dadka qaarkood waxay daawadaan Anime si sharci darro ah, dadka qaarna waxay daawadaan si sharci ah. Uma nimid inaan ku siino ra'yi ku saabsan goobaha qulqulka Anime ee Bilaashka ah oo aan kuu sheegno inaadan isticmaalin ama ha isticmaalin. Maqaalkan waxaan si fudud u dhex mari doonaa 10ka Goobood ee Daawashada Anime ee Bilaashka ah ee aan helnay bishii la soo dhaafay.
Cradle View si rasmi ah cradleview.net ma sameyso sheegasho xiriir la leh mid ka mid ah boggaga iyo xiriirka hoos ku taxan. Muuqaalka Cradle wuxuu si fudud u soo bandhigayaa ujeeddooyin waxbarasho iyo soo bandhigida waxyaabahan oo kale iyo isku xirka macluumaadka kama soo jeedin wax ficil ah haba yaraatee. Fadlan gal, akhri, oo arag xidhiidhinta macluumaadka/kooxaha hoose ee lagugu siiyay khatartaada/fikraddaada.
Sawirka waxaa la qaaday Axadii 4-ta Luulyo, 2021
Anime Ultima wuxuu leeyahay interface aad u soo jiidasho leh kaas oo u fiican booqdayaasha markii ugu horeysay iyo xulasho weyn oo ah bandhigyada anime-ka ugu fiican iyo filimada. Waxa jira dhawr xayaysiis oo aad la macaamilayso laakiin way u qalantaa waxa ay ku jiraan. Waxay leeyihiin noocyo badan oo kala duwan oo aad kala dooran karto oo si fudud ayaad u heli kartaa waxaad raadineyso adoo adeegsanaya aaladda raadinta ee goobta.
Qiimaynta Muuqaalka Crad:
Xiriirinta gelitaanka: https://animeultima.club/
123 Anime waa dhagax kale oo qarsoon kaas oo sida Kiss Anime ay ahayd inuu xidho. Laakin sida mar kasta oo kale goobtu waxay xidhmaysaa dhawr toddobaad ama bilo ka dib waxa ay dib u furtaa iyada oo hoos timaada domain ka duwan oo la mid ah si ay u sii wadaan halkii ay ka tageen.
Muddo dheer ayay jireen in ka badan 4 sano hadda, sidaa darteed waxaad heli doontaa nooc ka wanaagsan oo ka sii weyn oo Animes ah, laakiin sidoo kale qaar ka mid ah filimada Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed iyo Bandhigyada TV-ga oo aan aad uga helay.
Si kastaba ha ahaatee waxay weli haystaan ​​xulasho weyn oo Anime ah sidoo kale goobtooduna si kala duwan ayay u qalantaa in la hubiyo.
Xiriirinta gelitaanka: https://kissanime.com.ru/
4 Anime waa goob kale oo xiriir la leh Kiss Anime (in kasta oo ay sheeganayaan inaysan ahayn) kaas oo martigeliya bandhigyo badan oo Anime ah oo leh noocyo badan oo kala duwan sida: Actions, Ecchi, Romance, Comedy, Sci-Fi iyo qaar kaloo badan. Boggoodu aad buu u fudud yahay in la isticmaalo mana jiraan xayaysiisyo intaa le'eg oo sidoo kale ka dhigaya isticmaalaha khibrad loo dulqaadan karo. Sidoo kale bandhigyada waxaa sidoo kale jira filimaan caan ah oo Aasiya laga keenay laakiin si gaar ah Japan. 4 Anime waa goob aad u fiican oo lagu baadho Anime iyo bandhigyo la mid ah si aad u daawato haddii aadan hubin inaad daawato maadaama aadan xidhi doonin 3 daaqadood oo soo booda ah si aad u gaadho qaybta labaad ee Anime ee aad hadda samaysay. dhameeyay daawashada.
Xiriirinta gelitaanka: https://4anime.city/home/
9 Anime waa goob weyn iyo mid aanan xitaa u malaynayn inay shaqeysay markii hore. Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii xoogaa la sugay iyo xoogaa daaqado ah oo la xiray waxaan ogaaday in goobtan ay ku fiican tahay nooc kasta oo ka mid ah qulqulka Anime oo aan aad u adkeyd in la helo gabi ahaanba. Waxay ku soo baxday bogga natiijada ugu horeysay ee Google taas oo ahayd mid aad u fiican oo macnaheedu yahay in aan si fudud uga heli karo dhowr gujis. Waxay leeyihiin tiro badan oo anime ah oo ku yaal boggooda, qaybta ugu fiicanna waa inay sidoo kale martigeliyaan farabadan oo dhan oo lagu magacaabo Anime si fiican ayuu u fiicnaa. Waxaad ka daawan kartaa nooca Dubbed ee Kono Oto Tomare halkaas oo aad u fiican. Waxaa jira Anime badan oo caan ah halkaasna dhib kalama kulmi doontid helitaanka waxaad raadineyso, calaamadee ereyadayda!
Xiriirinta gelitaanka: https://9anime-tv.com/
6. Dhunkashada Anime
Hadda dabcan goobta hore ee Kiss Anime ee hore iyo asalka ah oo la xiray wax yar ka hor waxay lahayd wax kasta oo qurux badan iyo wax kasta oo ku yaal goobtaas, waxaan ula jeedaa inaad haysato Naruto, Hal Piece, waxaad lahayd Black Lagoon, xitaa Anime duug ah sida Golden Boy iyo Neon Genesis waxaana sidoo kale jiray Anime cusub sida Scums Wish. Ujeedadu waa goobtani waxay lahayd dhamaantiis oo ay xidhnayd iyadoo ay ugu wacan tahay cadaadiska kordhay ee ka imanaya ururka shirkadaha wax soo saarka ee Japan ee cadhooday, waxay u egtahay in tani ay ahayd dhamaadka goobta Kiss Anime. Si kastaba ha ahaatee, kaliya marka wax weyn lagala wareego iyada oo aan la helin beddel kale, wax muuqda ayaa dhacaya. Boodhka ayaa ka soo baxay marti-sharaf kale oo koobi ah sida kissanime.tv, kissanime.uk, kissanime.en iwm, ugu dambayntii waxa aanu haynaa kissanime.ru – goobta aad aadi karto. Waxay la mid tahay goobtii hore oo waxay leedahay qaab la mid ah kuwii hore. Waxa laga yaabaa in nuxurku is beddelo laakiin weli waxa jira magacyo waaweyn oo ay ka mid yihiin Boruto, One Peice iyo My Hero Academia.
5. Tag Go Anime TV
Marka laga reebo in lagugu soo daray xayaysiisyada soo booda, bandhigyada lulataaye iyo martigeliyaha kale ee la yaabka leh ee Go Go Anime waa meel qurux badan oo wanaagsan oo laga helo anime badan oo kala duwan. Waxaan dhawaan isticmaalay si aan u helo xilli ciyaareedkii 2aad ee Ikki Tousen kaas oo aan la heli karin Funimation inkastoo ay lahaayeen xilli ciyaareedkii 1aad, 3aad iyo 4aad laakiin aan ahayn 2nd. Sidoo kale waxaa jira martigeliyaha guud ee waxyaabo kale iyo anime duug ah oo aad ka heli karto waxayna leeyihiin animes kale oo badan oo kala duwan oo la daawado. Hoos u dhaca kaliya ayaa ah tayada muuqaalka, kaas oo la mid ah inta badan goobaha qulqulka sharci darrada ah, ma noqon doono wax cajiib ah.
Xiriirinta gelitaanka: https://www9.gogoanimehub.tv/
Anime Dao waxa ay jirtay in ka badan 3 sano hadda waana mid ka mid ah goobaha ugu fiican liiskan. Waxaan haynaa waxyaabo wanaagsan oo kaliya oo aan ka niraahno boggan. Khibrada isticmaaluhu waa wanaagsan tahay, navigation waa sahlan tahay, gelitaan menu oo wanaagsan, noocyo-hoosaadyo iyo noocyo dhammaantood si sax ah ayaa loo qoondeeyay, ma jiraan xayaysiisyo soo booda ah oo wejigaaga ah oo weydiinaya haddii aad rabto inaad ciyaarto casino Slot Ciyaaraha™ oo leh goblin indho guduud ah isla markaaba aad gujiso wax kasta iyo qaabka guud ahaan, nashqada goobta iyo fududaynteeda waa qaab soo dhawayn wanaagsan.
Dhammaan cinwaannada waxay ku yaalliin hal bog oo dabool leh oo aad si fudud u heli karto wax aad daawato. Waxay leeyihiin qaab mugdi ah oo tayada inta badan fiidiyowyada ay martigeliyaan waa kuwo aad u fiican. Kaliya waxyaabo wanaagsan oo laga sheego boggan runtii, waa inaad hubisaa boggan markaad awooddo.
3. Anime Jannada
Xiriirinta gelitaanka: https://animeheaven.ru/
Anime Heaven waa fadhi kale oo aad ku daawan karto Anime bilaash laakiin xayeysiisyada soo booda waa xanuun. Waa inaad xirtaa qiyaastii 2 kaliya si aad u daawato 1 muuqaal, ka dibna xidh 3 kale haddii aad rabto inaad xitaa u gudubto meel gaar ah qaybta.
Si kastaba ha ahaatee waxay martigeliyaan filimaan, bandhigyada TV-ga iyo wax badan oo kale iyo tayada fiidyowga aan ka helnay cilmi-baaristayada "balaadhan" ee cradleview.net waa mid aad u wanaagsan.
Isku soo wada duuboo maaha goob xun iyo mid aan soo muuqan doonin waqti dhow, taasoo la micno ah inaad si buuxda u maalgalin karto qaar ka mid ah taxanaha ay bixiso, maadaama ay jirto khatarta dhabta ah ee ugu yar ee martigelinteeda. xidhidh.
Xiriirinta gelitaanka: https://chia-anime.su/
Chia-anime waa goob aad u fiican taasina waa sababta ay ugu dhowdahay meesha ugu sareysa liiskan. Waxaad arki kartaa waxa ku jira adiga oo aan samayn koonto oo tan ayaa saxeexday haddii aad hiigsanayso uun inaad baahiso dhacdo tusaale ahaan.
Haddii aad rabto in aad la socoto waxa aad daawato oo aad rabto in aad la falgasho isticmaalayaasha kale oo aad ka faallooto / like saarto fiidiyowyada markaa waa inaad abuurtaa akoon. Sida inta badan goobaha Anime ee liiskan ku jira.
1. Dhunkashada Anime CC
Kiss Anime cc waa goob kale oo ka go'day boqortooyadii hore ee Kiss Anime oo abuuray http://www.kissanime.cc Anime streaming site oo u muuqda inuu si aad ah diiradda u saarayo oo lagu dhejiyay Anime halkii uu ka ahaan lahaa taxane Anime weyn oo aan hoos loo dhigin ama la naqdin.
Sababtan awgeed waxaan kugula talineynaa boggan haddii Ingiriisigu yahay luqadaada labaad maadaama aad ka heli doonto Anime badan oo lagu dhejiyay Ingiriisi oo waliba hoos loo dhigay.
Sidoo kale waxaa jira Anime oo aan ku qornayn Ingiriisi iyo Jabbaan oo keliya, laakiin sidoo kale luqado kale ku qoran iyo sidoo kale in laga dhigo mid ay heli karaan isticmaalayaasha kale ee ku hadli kara luqad kale sida Isbaanishka, Polish ama Faransiiska tusaale ahaan.
Xiriirinta gelitaanka: https://www1.kissanimes.cc/
Hagaag waa kaas! Waxaan daboolnay 10ka goobood ee ugu Wanaagsan ee Daawashada Anime ee Bilaashka ah fikradayada hoose. Fadlan xor u noqo inaad jeceshahay, wadaagto oo aad faallo ka bixiso maqaalkan oo aad ka iibsatid qaar ka mid ah badeecadaha Cradle View ee hoose si aad uga caawiso taageerada goobta iyo abuuryaasheeda. Maalin wanaagsan waad ku mahadsan tahay akhrinta.
Bright wuxuu leeyahay,
Ogosto 20, 2021 saacadu markay tahay 10:40 subaxnimo
Runtii waxaan rabaa inaan kaaga mahadceliyo la wadaago qoraalkan maadaama uu ka kooban yahay wax badan macluumaad.
10th Sebtember 2021 markay tahay 12:59 pm
Sidaas yeel dhammaan posts our.
Gelitaan Hore Waa Kuma Marwo Puiyi Mar Kale? - Model-ka Super-ka ah ee 'Viral Super Model' oo Noqday Xiddig Caalami ah Instagram-ka Caalamka
Gelitaanka Xiga 10ka ugu sarreeya Anime Waifus